October 16, 2020 1240
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) पारि’वारिक यात्राका क्रममा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिस्थि’तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने हुनाले सम’यमा कामहरु बन्नेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जा’नेछ भने पति पत्निबिच मा’याको डोरो अझ कसिलो भएर जानेछ । पारिवारिक यात्रा हुने अधिक सम्भावना रहेकोछ भने यात्राका क्रममा बिभिन्न रमाईला स्थलह:रुको भ्रमण गर्न सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) सवा’री साधनको प्रयोग गर्दा वा चलाउदा ध्यान दिनुहोला अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिन्न । दिनभर व्यास्त भएपनि न्यून पारिश्रमि’कमा चित्त बुझाउँनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । खानपिन तथा बाहिरि बाता’बरणको ख्याल ग’र्नुहोला । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउँनेछ । व्यापार व्याव’सायमा समय दिन न’सक्दा घाटा लाग्ने योग रहेको छ भने आम्दानिका स्रोतहरु साघु’रिनेछन् । माया प्रेममा धो’का हुनेछ भने पति दाम्पत्य जीवनमा घटपट आउँनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) माया प्रेम’मा अबिश्वास सिर्जना हुनेछ भने घर परिवारमा आमासँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ । अन्य का’ममा व्यस्त हुँदा पढाइ लेखा’इ कमजोर रहनेछ । कृषि तथा पशुपाल’न व्यावसायमा समय लगानि गर्नेह’रुले भनेजस्तो आम्दानि गर्न सक्नेछन् । समाजसेवामा नाम कमाउन अलि बढिनै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । आफन्त तथा ईष्ट मित्रसँग टाडिएर लामो यात्रा गर्नुपर्दा मन’मा बेचैन बढ्नेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरि फाईदा लिन सकिनेछ भने प्रतिश्पर्धिहरु परा’स्त हुनेछन् । माया प्रेममा सामिप्य’ता बढेर जाने तथा मिल्ने साथिको सहयोगले कामहरु बन्नेछन्् । रोकिएर बसेका कामहरु ब:न्नुको साथै बिस्तारै नयाँ काम बन्नेछन् । पढाइ लेखाइमा सुधार गर्दै सफलताको नजिक पुग्न सकि’नेछ । छिमेकीहरु माझ राम्रो कामगरी प्रशिद्धि क’माउन सकिनेछ ।
सिहं (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) समय तथा परि:स्थितिअनुसार चल्न नसक्ता अलि दुःख पाइनेछ । पहिलेका निर्णयले काममा चुनौती आउने देखिन्छ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा लाभ मिल्ने:छ। महत्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्वजनिक गर्न केही समय पर्खनुहोला। कुटुम्ब तथा आफन्त सँग मन’मुटाब बढ्ने तथा बिवाद सिर्जना हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) पुराना काम:बाट लाभ लिने समय रहेकोछ भने नया काम शुरु गर्दा मनग्गे आम्दानि हुनेछ । समयको सहि सदु:पयोग गरि रचानात्मक काम गरि समाजमा नाम कमाउन सकिनेछ । साभिभाईको सहयात्रा तथा सहका:र्यबाट राम्रा काम गर्न सकिनेछ । प्रेम गर्ने जोडिहरुका लागि समयले साथ दिनेछ भने नया नया प्रेम प्रस्ताब आउनेछ । बिद्यार्थीहरुले पढाईमा राम्रो प्रगति गरि आ:फन्त तथा गुरुवर्गहरुलाई खुसि राख्न स:क्नेछन् ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) स्वास्थको बिशेष ख्याल गर्नुहोला औषधि उपचार खर्च बढर जानेछ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुने तथा खर्च बढेर जानेछ । आफन्त तथा साथि:भाईहरुले :खासै सहयोग गर्ने छैनन् । पढाई लेखाईमा ध्यान नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । कामलाई दोहोर्याएर गर्नु पर्दा मानशिक त’नाब बढ्नेछ । स्वदेशमा उत्पादित सामानको व्यापारमा मन्दि आउने भएपनि बिदेश’मा उत्पादित सामानको व्यापार व्याव’साय फस्टाएर जानेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) आयभावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले खनिज पदार्थ तथा तरल पदार्थको व्यापार व्या:वसाय फस्टाएर जानेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो हुने तथा नया प्रकृतिको काम गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । पढाई लेखा:ईमा मन जाने हुनाले सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने तथा नया ठाउबाट प्रेम प्रस्ताब आउनेछ । ईच्छा आकांक्षा पुरा गर्न सकि:नेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) नाफा मुलक व्यावसाय भन्दा सेवामुलक व्यावसाय फस्टा:एर जानेछ । धर्म संस्कृति तथा यस्तै क्रिर्याकला:पमा दिन बित्ने योग रहेकोछ । अध्ययन तथा अध्यापनको शिलशिलामा लामो दुरिको यात्राको तय गर्न सकिनेछ । बिहानको सम:यमा घर परिवार तथा आफन्त: सँग मनमुटाब सिर्जना हुनेछ । बाहिरी बाताबरणको ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य:मा समस्या आउने योग रहेकोछ । प्रेममा मन:मुटाब सिर्जना हुनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) कष्ट भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ख्याल गर्नुहोला । माया प्रेम गर्ने जोडिहरुले आजको दिन नजिक नहुदै राम्रो रहनेछ । आर्थिक पाटा:हरु कमजोर रहनेछन् भने व्यापार व्यावसायमा आम्दानि नहुदा दैनिकी प्रभा:वित हुनेछ । दिदि बहिनिहरुसँग मनमुटाब बढ्नेछ भने आफन्त तथा साथिभाईहरु तपा:ईदेखि टाडिन सक्छन् ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) व्याव:साय फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै शिलशिलामा यात्रा हुनेछ । पर्यटन तथा यात्रासँग सम्बन्धीत क्षेत्रमा लगानि गर्दा मन:ग्गे लाभ मिल्नेछ । भौतिक सम्पतिको भरपुर प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ भने अरुको मन आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । साझेदारि व्यावसा:यबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । प्रेममा रमाउन चाहने जोडिहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
Prevविवाह गर्न लागेका गायक आदित्य नारायणसँग बैंकमा १८ हजार मात्रै
Nextआज कार्तिक १ गते शनिबारको राशिफल हेर्दै दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
के हुदैछ यो देशमा ? खबरदार, अति नगर ! भन्दै रबिले गरे यस्तो भिडियो पोस्ट (भिडियो सहित)
आज असार ६ गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
बेहोसीमा झुट बोँलेछु, मैले गर्भ फालेको कुरा सत्य होइन, गर्भ बोकेकै थिएन (भिडियो सहित)